Maxkammadii Suxufiyiinta oo Dib u Bilaabantay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Maxkammadii Suxufiyiinta oo Dib u Bilaabantay
La daabacay torsdag 20 oktober 2011 kl 10.18
Siddeeddii aroornimo ee saaka ayaa dib la isugu soo noqday maxkammaddii suxufiyiinta Johan Persson iyo Martin Schibbye ee magaalada Adis-ababa.
Goobta maxkamadda ayey goob-joog ka ahaayeen qaraabada suxufiyiinta, suxufiyiin badan ee ka socota dalka iyo waddammada kale ee caalamka sidoo kale diblomaasiyiin aan u tira badnayn sidii maalintii salaasada ee maxkammadu bilaabaty, uuna ka mid ahaa dal-jiraha dalka Noorway u matala Itoobiya.
Madaxa laanta xeerarka ee wasaaradda arrimmaha dibadda ee dalkan Iswiidhen Carl Henrik Ehrencrona goob-joogna uga ah dalkan sidii uu u indha-indheeyn lahaa uguna soo war-gelin lahaa ayaa ka gaabsaday inuu ka warrammo xaalka maxkammadda iyo war-gelinta uu u gudbiyo maamulka wasaaradda uu ka howl-galo iyo wasiirka wasaaradda arrimmaha dibadda Carl Bildt.
- Iima muuqdaan sababo aan u dhaleeceeyo nidaamka shuruucda ee dalka Itoobiya, mana ahan mid u daneenaysa suxufiyiinta maxkamadda hor-taagan, sida uu u sheegay mar uu u warramayay hayadda wararka ee TT, isagoona intaa ku daray in laga akhrisan karo war-bixin, heerka dalkani ka taagan yahay ilaalinta xuquuqda bani'aadamka bogga qoraalka Internet-ka ee wasaaradda arrimmaha dibadda.
Xoogaa dabadeed oo bilowgii maxkamaddu gashay jah-wareer maadaama la sugayay tarjubaanno ayuu xeer-ilaaliyuhu soo ban-dhigay dacwaddii raggaa lagu soo oogay, iyada oo dabadeedna gar-yaqaannadu soo ban-dhigeen fikirka ey dacwaddaa ka qabaan.
Gar-yaqaannada suxufiyiinta ayaa carrabka ku adkeeyey in aaney fahansaneeyn habka ama sida suxufiyuuntu u taageereen ama u taageeri kareen jabhaddan lagu diiwaan-geliyay argagixisnimada.